Miaraka amin'ny tranga COVID vaovao maherin'ny 40,000 ao anatin'ny 2 andro dia nangataka fanjakana roa i India mba hametraka fe-potoana tsy fahazoana mivoaka
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana India » Miaraka amin'ny tranga COVID vaovao maherin'ny 40,000 ao anatin'ny 2 andro dia nangataka fanjakana roa i India mba hametraka fe-potoana tsy fahazoana mivoaka
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao momba ny fahasalamana • Vaovao Mafana India • Vaovao • People • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Nangataka tamin'ny fanjakan'ny Kerala sy Maharashtra ny governemanta Indiana mba hihevitra ny tsy fahazoana mivezivezy amin'ny alina ho fitomboan'ny tranga COVID vaovao.
India dia nitatitra aretina maherin'ny 40,000 vaovao COVID-19 nandritra ny roa andro nisesy ny zoma.
Niakatra tampoka ny aretin'ny virus coronavirus tao India tato anatin'ny telo andro.
Kerala dia nitentina efa ho 60% amin'ireo tranga vaovao tamin'ny herinandro lasa, narahin'ny 16% tao Maharashtra.
Ny governemanta foiben'i India dia nanentana ny fanjakan'ny Kerala sy Maharashtra mba hametraka ora tsy mandeha amin'ny alina any amin'ny faritra misy ny tsimok'aretina virus coronaavirus satria India dia nandrakitra tranga COVID-40,000 vaovao 19 XNUMX nandritra ny roa andro nisesy androany.
Ny tranga Coronavirus dia nihena tamin'ny ambany 5 volana 25,166 tamin'ny tapaky ny volana aogositra fa nitombo tampoka tao anatin'ny telo andro lasa izay, indrindra ny tao Kerala izay nanao fety lehibe izay nihaonan'ireo fianakaviana matetika.
India dia nitatitra aretin-tratra COVID-44,658 vaovao 19 32.6 tamin'ny zoma, ka 496 tapitrisa no totaliny, betsaka indrindra eran'izao tontolo izao taorian'ny Etazonia. Niakatra 436,861 ny maty ary XNUMX.
Kerala, eo amin'ny tendrony atsimon'i India, dia nitentina efa ho 60 isan-jaton'ireo tranga vaovao tamin'ny herinandro lasa ary mihoatra ny antsasaky ny tranga mavitrika, arahin'ny 16 isan-jato amin'ny fanjakana andrefan'i Maharashtra.
"Ezaka bebe kokoa no ilaina hisamborana ny fitomboan'ny aretina", ny minisiteran'ny trano federaly dia nilaza tamin'ny fanambarana ny alakamisy hariva teo taorian'ny nanatontosana fihaonan'ny sekretera azy tamin'ny fanjakana roa tonta, ary tamin'izany dia nangatahina i Kerala sy i Maharashtra mba "hizaha ny mety hametrahana ny ora tsy hialana alina amin'ny faritra misy fisondrotana be".
Nanome toky koa ny minisitra fa hisy vaksinin'ny COVID-19 fanampiny halefa any amin'ireo fanjakana roa ireo.
India dia hatreto no nanatanteraka fatra vaksiny maherin'ny 611 tapitrisa, manome farafahakeliny fatra iray ho an'ny antsasaky ny 944 tapitrisa olon-dehibe ary fatra roa tokony ho 15 isan-jato.